Warmly Welcome: မေးလို့ .. .. ဖြေကြည့်ချင်တယ်
အချစ် လား. သူစိတ်ချမ်းသာမှူကိုဘဲ ရှေ့ရူပါတယ။်
အချစ်လား? ၀င်ခဲ့လေ ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ် ... ဟိ
အချိန်ယူပြီး ရေးမယ်နော် လောလောဆယ် အချစ်ကြောင့် လွမ်းနေရလို့ ... အချစ်အကြောင်း မဟုတ်ဘဲ အလွမ်းအကြောင်းဖြစ်နေမှာစိုးတယ်။
တစ်ကယ်လားဗျာ။ ကျွန်တော်က အချစ်နည်းနည်းပဲ ပြန်ရတဲ့သူ။ အချစ်ဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါဖြင့် အချစ်ကိုများများယုံရင် များများပြန်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား.. သိပ်တော့ မထင်ဘူးနော ..
ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ အချစ်ဒဿနကို လာဖတ်ပါတယ်။
ရှာရှာကြံကြံ ရေးသားနိုင်တာကိုတော့ ချီးကျူးပါရဲ့
ဒီလို အချစ်မျိုးပေးနိုင်ပါရဲ့လားနော်
အချစ်လား .. သူဖျားနေတယ် သုမောင် ရဲ့ သီချင်းလား (သို့) စာအုပ်နံမယ်လားမသိဘူး ဟီး၂
အချစ်က နာကျင်စေတယ်..ကိုယ်ချစ်သလောက်ပြန်မရတာလဲ အချစ်ဘဲ..ဒါပေမယ့် လူတွေတော်တော်များများဟာ အချစ်ရှိမှာ ပြည့်စုံနေသလိုဘဲ ထင်ကြတယ်..
ကျနော် ခံစားမိတာလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ရေးလိုက်တာနော်
ကူးသွားတယ် ပရိုရေ့ ....
အချစ်ဖွဲနွဲ့ ချက်တွေက ထိပါတယ်...
အချစ်က မရောက်သေးတဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ရောက်နေသလို လှည့်စားတတ်တယ်ဗျာ။။
အချစ်ဒသာနလေးတွေကို လာခံစားသွားတယ်အကိုရေ အကိုရေးထားတဲ့အောက်က ၁၁ ကြောင်းကို ကူးသွားပြီနော် အဆင်ပြေပါစေ အကိုရေ။
အချစ်လား... ယောကျာင်္းယူ သွားတာကြာပေ့ါ...
ကောင်းကောင်းမသိလို့ ပဲ နော်... ပြော သွားလိုက်တာ စုံ လို့ ...
၀ဲလ်ကမ်းရေ.... အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင်တောင် ဖော်ထုတ်ပြနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ အနက်နဲဆုံးသော လျှို့ဝှက်ချက်ပါ။
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ အမှန်တွေချည်းပဲဗျို့...။
မချစ်တတ်ခင်က မလိုအပ်ဘူး။ အပိုအလုပ်လို့ထင်မိတယ်။
ချစ်တတ်လာတော့ နင့်နေအောင်ခံစားရတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု့ ၀မ်းနည်းမှု့တွေ အပြည့်ပဲ။
အစ်ကိုရေ ။ မနေ့ညက တက်ထားပြီး ကျောင်းသွားနေလို့ ခုမှလာဖတ်ရတရ် ။ တော်တော်တောင်မန့်သွားပီ ။ ကျေးဇူးတင်တရ် အကိုရေ ။ အချစ်အကြောင်းတွေ သိလိုက်ရလို့ပါ ။ ညီလိုချင်တာကိုလည်း ကူးလိုက်တရ် ။ အတွေးအရေးက မိုက်တရ်ဗျာ ။ အားကျတရ် ။
ရယူခြင်းမဟုတ်ရင် အချစ်က ဘာလည်း ငါ့ကိုလည်း ပြောပြထားဦးဟေ့ ဆိုတာနဲ့
အချစ်ဆိုတာဟာ ရယူခြင်းမှ မဟုတ်ပဲ မဏိစန္ဒာ ....
ဘာကပိုမှန်မလည်းအစ်ကိုရေ ။ ခေါင်းစားသွားပလား ဟဲဟဲ ။ စတာပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတရ် အစ်ကိုရေ မသိတာလေးတွေကို သိလိုက်ရလို့ပါ ။
အချစ်လား သူဖျားနေတယ်..။ :D
ရွာက ဘုတ်ဆုံမကို လွမ်းတယ်ကွာ
အချစ်အကြောင်းပြောရင် သူကနေစရမှာ ..
ခုတော့ .. ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ အဆင်မှ ပြေပါ့မလား အသိဘူး ငါ့ညီရေ ..
နင့်ကို ရည်းစားစာ ရေးခိုင်ပါတယ်ဟယ်
အချစ်ဆိုတာ ပေးတိုင်းပြန်မရတတ်သလို၊ ပေးသလောက်လဲ ဆတူပြန်ရချင်မှရတတ်တာ ... လောကကြီးက လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အချစ်တွေကို တွဲစပ်မပေးတတ်ဘူးလေ ...
ဒါပေမယ့် ရေးထားတာလေး အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ် ...
ဒါနဲ့တောင် ဂေါ်မစွံ့ဖြစ်နေတာ သနားစရာပါ။
ကိုဝင်းဇော်က မိန်းမသာမရှိတာ အချစ်အကြော်ငးရေးတာ ချောနေတာပဲ ရည်းစားဘယ်နှယောက်ထားဘူးလည်း
တို့အချစ်လား အွန်လိုင်းမှာ မျက်စိလည်နေတယ်
လောကကြီးကိုက အချစ်နဲ့စြ့ပီး အချစ်တွေနဲ့ဘဲ သံသရာလည်နေကြတာလေ။လူတိုင်းမှာ မွေးကတည်းက အချစ်ရှိကြတယ်။အဲဒီအချစ်က ကောင်းကျိုးတွေပေးသလို ဆိုးကျိုးတွေလည်းပေးတတ်သကိုး ဒါကြောင့် အချစ်ဆိုတာကို အချစ်နေရာလေးမှာဘဲထား မပိုက်ဆိုင်ချင်မိစေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ချင်လို့က ပူလောင်ပြီသာမှတ် ဒကာလေး မောင်ဝင်းဇော်၊ ဟဲ..ဟဲ
အချစ်အောကာင်းရေးထားတာလေးတွေဖတ်သွားတယ် မောင်ဝင်းဇော်ရေ။ အစ်မလဲ ရေးရဦးမယ်။
အဟား.. မိုက်တယ်ကွာ..(မလိမ္မာဘူး... :P)
ဦးဥိးဝင်းဇော်က လန်ထွက်နေတာပဲ.. အချစ်..အချစ်...
အချစ်အတွက် လာရောက်လေ့လာသွားပါတယ်... အဟား.. အခုထိ ကိုရဲရဲ့ တက်ဂ်ကျွေး ကို မက်မက် မဆပ်ရသေးဘူး.. ဟင့်.....